Torolàlana hijinja ovy - Potatoes News
Torolàlana ho an'ny ovy amin'ny fijinjana
Mpikambana malaza ao amin'ny zaridaina legioma, ny ovy dia iray amin'ireo voly mora indrindra maniry. Ny zavamaniry ovy voly kely fikojakojana, be dia be, manampy amin'ny fanafoanana ny fitomboan'ny ahidratsy sy mamboly ny taninao. Izy ireo dia faly mitombo ao anaty kaontenera sy nampakarina fandriana na namboly tahaka ny amin'ny tany.
Torolàlana ho an'ny fijinjana ovy 6
Rahoviana anefa ny tubers ovy no vonona hijinja? Ary, angamba ny tena zava-dehibe kokoa, ny fomba fanangonanao azy ireo? Ny mpitari-dalana anay amin'ny fijinjana ovy dia hilaza aminao ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao.
Rahoviana aho no mioty ny ovy?
Rehefa vonona ny hijinja ny vokatrao dia miankina amin'ny lafin-javatra maromaro, ao anatin'izany ny toetoetran'ny fitomboanao sy ny toetr'andro. Miankina amin'ny karazana ovy nambolenao ihany koa izany. Ny zavamaniry ovy voa dia mizara ho sokajy 3:
Zavamaniry ovy voalohany
Araka ny lazain'ny anarany dia ny zavamaniry ovy voalohany dia iray amin'ireo voly voalohany azonao ambolena ary, noho izany, manomboka mioty. Ireo mpikarakara zaridaina any amin'ny ankamaroan'ny faritra dia afaka mamboly voaloboka voalohany hatramin'ny faran'ny volana febroary ka hatramin'ny tapatapaky ny volana martsa. Ny tubers dia vonona hijinja eo amin'ny 10 ka hatramin'ny 12 herinandro aorian'izay. Raha tsara ny toetr'andro, dia mety ho afaka hijinja kely aloha ianao.
Ny sofina voalohany dia iray amin'ireo karazana ovy mora maniryina satria tsy dia mararin'ny aretina izy ireo. Fantatra amin'ny tsiro malefaka sy mahavoa azy ireo, ny sofina voalohany dia mazàna kely noho ny karazany maincrop, sahabo ho ny haben'ny atody ary amin'ny hoditra malefaka. Ny karazana malaza dia misy:
Duke Mena any York,
Mba hahafantarana tsara hoe rahoviana ianao no manomboka mioty ny salohim-bary voalohany, jereo tsara ny voninkazo. Ny karazany voalohany dia mamokatra voninkazo izay mety maniry na tsia. Rehefa manomboka milatsaka ny tsimoka, na manomboka mihena ny voninkazo dia izao no manomboka mioty ny vokatrao. Ny sasany amin'ireo ravina dia mety manomboka mavo ihany koa.
Mba hijerena ny vokatrao alohan'ny manomboka hijinja dia afindra moramora manodidina ny tampon'ny zavamaniry ny tany sasany. Raha mahita ovy mitovy habe amin'ny atody ianao dia afaka manohy mioty. Raha mila spuds lehibe kokoa ianao dia avelao ao anaty tany mandritra ny fotoana fohy kokoa izy ireo.
Torolàlana ho an'ny fijinjana ovy 7
Karazana faharoa voalohany
Ny felam-boninkazo faharoa dia nambolena nanomboka ny fiandohan'ny volana martsa teo ho eo, matetika hatramin'ny andro voalohan'ny lohataona, manodidina ny 2 ka hatramin'ny 3 herinandro aorian'ny fambolena ny masomboly voalohany. Ny mpamboly sasany dia maniry hamboly azy ireo amin'ny fotoana mitovy amin'ny masomboly voalohany, fa tsara kokoa ny miandry. Ny fiandrasana herinandro vitsivitsy dia midika fa vonona ny hijinja ny sofina faharoa raha tokony ho 3 herinandro aorian'ny fampiakarana ny kavina voalohany. Ny karazany faharoa voalohany dia misy:
Toy ny earlies voalohany, ny fomba mora indrindra hilazana raha vonona hijinja ny sofina faharoa dia ny mijery ny voninkazo. Raha vantany vao manomboka mihintsana avy amin'ny zavamaniry ny voninkazo na ny tsimoka tsy misokatra, dia azonao atao ny manomboka ny fijinjana ovy.
Matetika novolena iray volana teo ho eo taorian'ny earlies faharoa dia afaka mamboly spompte maincrop ianao manomboka amin'ny diabe mandroso mandritry ny fijinjana mialoha. Maincrops matotra ao anatin'ny 20 herinandro. Ny tubers lehibe kokoa noho ny karazany aloha dia mitaky fotoana mitombo ela kokoa izy ireo. Ny tubers maincrop mahazatra mahazatra dia misy:
Apple Fir Pink.
Matetika dia afaka manomboka mioty ovy maincrop ianao amin'ny volana aogositra. Ny fiotazana dia afaka maharitra hatramin'ny septambra, miankina amin'ny datin'ny fambolena anao. Vonona hijinja ny maincrops raha mavo ny ankamaroan'ny ravina ary manomboka mivolontsôkôlà na mihintsy. Ny famelana ny zavamaniry ho faty alohan'ny hanombohanao hijinja dia ahafahan'ny tubers mitahiry ny masira betsaka. Manampy azy ireo hameno tsiro azy ireo izany.
Hetezo ny zavamaniry maincrops anao, tapaho hatramin'ny iray santimetatra ambonin'ny tany ny zavamaniry. Aza misintona tuber aloha. Miandrasa herinandro vitsivitsy, mitazona tsara ny tany izy ireo, alohan'ny hijinja. Manampy amin'ny fanasitranana ovy, manamafy ny hoditra ary manamora ny fitehirizana izany. Raha tsy mikasa ny hitahiry ny mpanelanelana maincrop ianao dia afaka manomboka mioty raha vantany vao vonona ny zavamaniry.
Rahoviana no hijinja tubers fararano
Raha namboly maincrop tara ianao amin'ny fijinjana ririnina dia avelao ny toetr'andro sy ny zavamaniry hilaza aminao rehefa hijinja. Tahaka ny fambolena teo aloha, avelao ho faty eo an-tampon'ny zavamaniry alohan'ny hanangonanao.
Torolàlana ho an'ny fijinjana ovy 8
Mety misy fiatraikany amin'ny hafanana koa ny mari-pana. Ny zavamaniry ovy dia mahazaka fanala maivana nefa tokony hatsangana sy hotehirizina alohan'ny hahatongavan'ilay fanala mafy voalohany. Ny tany dia tokony ho 40 least farafaharatsiny ary azo iasana. Aorian'ny fanasitranana ny vokatra dia azo tehirizina mandritra ny ririnina sy ny fiandohan'ny lohataona. Ny fambolena vokatra lehibe sy tara amin'ny fararano izay azo tehirizina dia fomba tsara iray hamboly ny sakafonao manokana mandavantaona.
Ahoana ny fijinjana ny ovy
Mitandrema rehefa mioty. Miezaha tsy hanimba ny tubers. Zava-dehibe indrindra izany raha mikasa ny hitahiry ny spuds-nao ianao. Ny tubers simba dia mahalana no mitahiry tsara ary, mety hahatonga ny vokatrao ho lo.
Ny fambolena fantson-drano dia tsara atao amin'ny andro maina. Ny hamandoana be loatra mandritra ny fijinjana dia mety hampirisika ny lo sy ny aretina. Na ianao izany mitombo ovy ao anaty kaontenera na amin'ny tany, ny fijinjana dia mitovy amin'ny ankapobeny.
Fomba fijinjana aloha sy faharoa
Mora kokoa amiko ny mampiasa ny tanako hanesorana ireo voly ovy voalohany. Fonon-tànana manao zaridaina ampio hitazona ny tananao ho madio sy voaaro.
Ampiasao ny tananao hanatratra ny tany ary hikaroka spuds betsaka araka izay hitanao. Raha nofongarinao ny tany manodidina ny zavamaniry nandritra ny fotoana nitomboany dia esory tsara ny tany ary alao ny ovy izay ilainao alohan'ny hamerenanao ny tany manodidina ireo zavamaniry. Rehefa maka ny zavatra ilainao fotsiny ny fijinjana, dia tsy mitahiry tsara ny karazany voalohany. Mitazona tsara kokoa ny tany izy ireo. Raha ny marina dia maro no mitombo sy mivoatra.
Aorian'ny fijinjana dia apetaho a zezika emulsion trondro amin'ny zavamaniry. Izany dia mamporisika andiana tuber vaovao sy fitomboana vaovao hamorona.
Torolàlana ho an'ny fijinjana ovy 9
Raha mamboly ovy ao anaty kaontenera toa Delxo 7 galona hitombo kitapo izay misy varavarankely fijinjana, atsangano fotsiny ny sarony ary esory ny tany mandra-pahitanao ny ovy. Rehefa avy mijinja izay ilainao ianao dia azo soloina ny tany ary ny ovy sisa dia afaka mitombo mandra-pahatonganao vonona hampiasa azy ireo.
Rehefa mioty sy mitantana zavamaniry ovy ianao dia mety hahita voa kely ovy eo amin'ireo ravina. Matetika izy ireo dia mitovy voatabia maitso sy serizy. Misy poizina ireo ary tokony horavana na apetraka amin'ny antontany.
Ahoana no fijinjana ny Maincrop anao
Ho an'ny zavamaniry lehibe kokoa dia mety mila mampiasa zina zaridaina ianao hananganana ilay zavamaniry iray manontolo. Ampidiro ao anaty tany ny tapa-kazo tokony ho iray metatra miala ny afovoan'ilay zavamaniry. Atsofohy any anaty tany araka izay azo atao. Ny tanjonao dia ny hampiakatra ny vongany faka ho iray. Mety mila mampiditra ny fork ianao imbetsaka vao afaka manao izany. Aza hadino ny mijery ny tany aorian'ny nakarinao ny zavamaniry raha misy ovy mety navelanao tany aoriana.
Aorian'ny fijinjana dia esory ny loto ary avelao ho maina mandritra ny ora vitsivitsy ny spuds alohan'ny hampiasana na hitahirizana azy.
Ny zavamaniry ovy maincrop maniry ao anaty kaontenera dia azo jinjaina amin'ny alàlan'ny fanipazana ny ao anaty kaontenera ao anaty ravina tara. Azonao atao ihany koa ny manafoana ny tany kodiarana. Sivano amin'ny tany mba hanangona ny spuds rehetra anao.
Raha mioty tubes maincrop na ovy ianao amin'ny fitahirizana ririnina, manovoza vitsivitsy hanandramana azy ireo alohan'ny hijinjana ny vokatra manontolo. Ny hoditra dia tokony ho matevina ary mifatotra mafy amin'ny nofo. Raha azo kosehina mora foana ny hoditra avy amin'ilay zavamaniry dia vaovao loatra ny tubers ary tokony havela ao anaty tany mandritra ny andro vitsivitsy.
Rehefa mioty dia mitandrema mba tsy hanorotoroana na hanapaka ny vokatra. Ny tubers simba dia lo mandritra ny fitehirizana.
Aorian'ny fanangonam-bokatra, sitrano ny tubers amin'ny alàlan'ny famelana azy ireo hipetraka amin'ny toerana maina mandritra ny 2 herinandro. Mandritra io fotoana io dia tokony ho 45 ka hatramin'ny 60 ℉ ny maripana manodidina ny vokatra. Rehefa manasitrana ny hoditr'izy ireo ny ovy ary mikatona ny fanapahana madinidinika. Aorian'ny fanasitranana dia azonao atao ny mitahiry ny tubers avy eo. Raha tsy azonao antoka ny fitehirizana ny ovy aorian'ny fijinjana, mpitari-tolona lalina lalina ity.
Rehefa mioty ovy na manala azy ireo amin'ny fitehirizana dia jereo hatrany ny lokon'ny hodiny. Aza misy fantsona maintso. Ireo dia manana ambaratonga alkaloida mitombo, mazàna vokatry ny fihanaky ny hazavana loatra. Ny spuds maintso koa dia mety misy solanine. Tsy vitan'ny hoe mampangidy azy ireo fotsiny izany, fa misy poizina koa. Mba hisorohana ny maintso dia ataovy ao anaty maizina araka izay azo atao ny ovy.
Na dia maniry be dia be aza ny ovy maniry dia mety mitaky fahombiazana ihany koa rafitra fihodinan'ny vokatra, tena mendrika ny fiezahana izany. Ny tubers ovy vao mioty dia malefaka kokoa ary misy tsiro manankarena kokoa noho ny spuds novidiana. Izy ireo koa dia iray amin'ireo vokatra mora indrindra hambolena sy hijinja.
Fambolena ovy voa ao anaty fianakaviana mamony, maniry karazany 31
Fepetra tena tsara ho an'ny ovy kanadianina any amin'ny faritany mitombo roa